XOG+DAAWO: Waa maxay qorshaha Wafdiga Beesha Caalamka ee tagaya saaka Kismaayo?
KISMAAYO(P-TIMES) – Wafdi gaar ah oo kasocda beesha Caalamka ayaa lafilayaa in ay Khamiista maanta ah socdaal rasmi ah ku tagaan magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee Jubbaland, waxaana wakiiladu ay u tagayaan arrimaha la xariira doorashooyinka Madaxtinimada ee kadhacaya halkaas.
Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo wafdigan uu hogaaminayo ayaa la kulmi doona Madaxda Jubbaland iyo guddiga doorashada oo ay kala hadli doonan arrimaha doorashooyinka ee hadda socda.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Max’ed Islaam ayaa ka hadlay arrimaha doorashada, waxaana war qoraal ah oo lagu baahiyey barta FACEBOOK-ga ee Madaxtooyada Jubbaland lagu sheegay in uu soo dhaweynayo.
Mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ee cusub ayaa doraad la dhaariyey, waxayna maanta bilaabayaan howlaha la xariira qabashada doorashada guddoonka baarlamaanka cusub, iyadoo ay xilkaas u tartamayaan qaar kamid ah xubnaha baarlamaanka.
Wakiilada caalamiga ah ayaa dhawaan soo saaray qoraal ay uga hadlayaan arrimaha ka socda magaalada Kismaayo, waxayna ku baaqeen in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo ay tahay in ay dhammaan dhinacyadu ku wada qancaan.
Musharaxiinta Isbedel-doonka ah oo horey qaarkood aad ugaga hadli jiray arrimaha doorashooyinka ayaa hadda ka gaabsaday tan iyo markii baarlamaanka lasoo saaray, waxaana qaarkood ay walaac ka muujinayaan sida ay wax kusocdan.